Manontany Tena Ireo Mpifanandrina Amin’i Putin ao Rosia Hoe Hanao Ahoana Ny Fiharatsian’ny Toe-javatra Noho i Trump · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2016 4:53 GMT
Vakio amin'ny teny русский, 简体中文, Français, Español, English
Iray amin'ireo sary-sy-soratra marobe momba an'i Putin-Trump tao amin'ny aterineto.
Taorian'ny fandresen'i Donald Trump, nisy ny tombantombanana marobe tao Rosia sy Etazonia raha ho lasa namana na fahavalon'i Kremlin ny komandy lehiben'i Amerika vaovao.
Talohan'ny herinandro lasa, naminavina lalan-tsarotra ao Washington ambanin'ny fitondran'i Hillary Clinton ny ankamaroan'ny manam-pahaizana sy ny mpanombana ara-pifidianana. Raha tokony ho izany, mijery ny fitantanana efa-taona eo amin'ny lehilahy iray nidera imbetsaka ny asa goavana ara-jeo-politikan'i Vladimir Putin izao tontolo izao ary naneho ny fahavononany hanoratra indray ny fanekena politika ivelany Amerikana ao Eoropa Atsinanana, izay nolazain'i Rosia fa tsy mahafaly azy amin'ny fitsabahan'ny OTAN.
Satria mahay mifehy ny fikoropahan-dry zareo taorian'ny fifidianana ny mpanohitra an'i Trump ao Etazonia sy manerana izao tontolo izao, somary ao anatin'ny korontana kosa ireo mpanohitra demaokratika ao Rosia, satria nametraka tampoka filoha izay lehilahy toa tsy dia liana amin'ny toetry ny demaokrasia ao Rosia ilay fahefana tandrefana matetika itadiavany tari-dalana sy fanohanana.
Na dia samy manana ny fihetseham-pony aza ireo Rosiana mpanohitra momba an'i Trump, mazava fa liana kokoa te hahafantatra ireo mpikatroka sy mpanao politika raha hanampy na hanakana ny tolon'izy ireo hamarana ny fitondran'i Putin sy hamelona indray ny andrim-panjakana demaokratika ao Rosia ny filoha Amerikana vaovao .
Taorian'ny fifidianana tao Etazonia tamin'ny herinandro lasa, namoaka lahatsoratra bilaogy sy lahatsary YouTube ilay mpikatroka miady amin'ny kolikoly Alexey Navalny, manontany raha ratsy na tsara ho an'i Rosia i Trump. Efa nisy nijery in-1 tapitrisa ny lahatsary, izay manasongadina dikanteny Anglisy.
Nilaza i Navalny fa toa tsy fanomezana ho an'i Kremlin i Trump izay ahiahian'ny maro noho ny antony efatra lehibe: (1) Hitarika fidinan'ny vidin-tsolika ny fampanantenan'i Trump hampihena ny fiarovana ny tontolo iainana sy hanalalaka ny famokarana angovo ao Etazonia; (2) Efa hatramin'ny taloha ny fiderana goavana nataon'i Trump an'i Putin; ary mety tsy hanaisotra ny sazy izy na dia te hanao izany aza (3) Hanomboka hazakazaka fanamboarana fitaovam-piadiana vaovao i Trump, hampiroborobo ny fandaniana amin'ny fiarovana; ary (4) tsy mitovy hevitra momba ny olan'ny politika anatiny toy ny fifindra-monina, ny andraikitry ny fitondrana amin'ny toe-karena, ny zo hitondra fitaovam-piadiana, ary ny “fanasilamoana (Islamisation)” i Trump sy i Putin. (Amin'ity teboka fahefatra ity, miantso mazava ireo namany “nasionalista-liberaly”, izay akaiky fomba fijery kokoa ara-politika amin'i Trump fa tsy amin'i Putin mikasika amin'ireo olana ireo, i Navalny.)
Na dia teo aza ireo mpijery an-tapitrisany sy ny “milay” 35.000, tsy naharesy lahatra ny rehetra i Navalny amin'ny hoe vaovao ratsy ho an'i Kremlin i Trump.
Nasionalista-liberaly malaza ao Rosia amin'izao fotoana izao toa an'i Navalny i Vladimir Milov. Tsy tahaka an'i Navalny, manam-pahaizana momba ny sehatry ny angovo ihany koa izy. Tamin'ny taona 2002, efa minisitra lefitry ny angovo tao amin'ny Federasiona Rosiana izy. Tamin'ny Alahady 13 Novambra, niresaka tamin'ny tetikasa antserasera “Mpikatrok'i Moskoa” i Milov, nanazava ny fahadisoam-panantenany tamin'ny fifidianana Amerikana sy ny tahotra fa mety ho very mpiara-dia lehibe aminy ny demaokratika mpanohitra ao Rosia ary mety hanana mpifanandrina mampidi-doza.
Ho an'ny mpanohitra Rosiana, tsy mila an'i Amerika izahay. Asanay ny mitondra fanovana eto Rosia, ary tsy hipetrapetraka hiandry fanampiana avy amin-dry zareo [Amerikana] izahay.
Saingy hilaza izao aho: nanao fampielezan-kevitra nandritra ny herintaona mahery i Trump, ary tsy mbola nitsikera an'i Putin tamin'ny fomba matotra na dia indray mandeha aza izy sy i i Pence mpiara-mihazakazaka aminy. Taorian'ny nanombohan'i Putin ny ady tao Okraina atsinanana izany, izay olona 10.000 no maty, ary tao no nitifirana ny Boeing Malayziana nisy mpandeha tsy manan-tsiny 300. Ary mitohy ny famoretana miavaka mihatra amin'ny mpanohitra ara-politika ao Rosia. Vao tsy ela akory izay, nahita resabe tamin'ny media mikasika an'i Ildar Dadin, izay voadaroka tao am-ponja ny rehetra, nogadraina izy noho ny fanoherana nitondra sora-baventy. Novonoin'izy ireo ho faty i Boris Nemtsov. Mbola maro ireo mitranga.
Nandritra izany rehetra izany, tsy mbola nilaza teny ratsy momba an'i Putin na ny fitondrany ao Rosia mihitsy i Trump.
Mijery marika mitovy isika: misy dikany aminy ve izany, sa misy zavatra hafa lehibe kokoa aminy? Amin'izany, mandray antsika ho toy ny mpitarika masiaka, feno fankahalana i Trump — mpitarika iray mety ho mpifanandrina amintsika ary mety ho iray amin'ireo mpiara-dia amin'i Putin.
Raha ny marina, lasa mpitarika fanjakana izay mankahala antsika izy amin'izao fotoana izao. Ho antsika, mazava ho azy, Amerika no mariky ny fahalalahan'izao tontolo izao. Nanao zavatra marobe ho amin'ny fampandrosoana ny demaokrasia manerantany izy, saingy miova ao anaty fijery manamaro ny zavatra rehetra miaraka amin'ny mpitarika tahaka ity izany, ary hitantsika ao amin'i Trump ny mpiara-dia amin'ny mpanao didy jadona. Hitanao ny firohotr'ireo mpanao didy jadona niarahaba azy. Hitanao ny hafalian'ireo hery manohitra ny fanatontoloana manerantany manoloana ity fandresena ity.
Saingy tsy miteraka antony isian'ny fankalazana izany. Miahiahy aho fa, atsy ho atsy, ho lasa firenena mety hanampy be an'i Putin i Amerika. Ary ho antsika, tena mampalahelo fa tsy niteraka na dia fitsarana ara-pitondra-tena kely indrindra avy amin'i Donald Trump aza ireo fahatezerana rehetra miseho ao Rosia ireo.
Nizara ny fanehoan-keviny tao amin'ny Facebook i Milov, niresaka azy ireo ho toy ny “fampahatsiahivana” ny “hafahafa ao amin'ny Rosiana mpanohitra izay nitsiriritra an'i Trump sy ny ‘fanapahan-kevitry ny vahoaka Amerikana.'” “Toa namitaka azy ireo ny Devoly,” hoy izy nanoratra .